Nikhil Raj's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone
Zvinyorwa na Nikhil Raj
Svondo, Kurume 17, 2013 Chipiri, Gunyana 24, 2013 Nikhil Raj
Ini ndanga ndichangobva kuyedza kweGoogle Tsvaga Injini Mhedzisiro. Ndakatsvaga izwi rekuti WordPress. Mhedzisiro yeWordPress.org yakabata pfungwa dzangu. Google yakaronga WordPress nerondedzero Semantic Yekushambadzira Platform: Cherekedza snippet yakapihwa neGoogle. Ichi chinyorwa hachiwanikwi muWordPress.org. Muchokwadi, saiti haina kupa meta tsananguro zvachose! Google yakatora sei iwo mavara anoreva? Tenda kana kwete, yakawana rondedzero kubva kune imwe
Chipiri, January 15, 2013 Chipiri, Gunyana 24, 2013 Nikhil Raj
Isu takafukunura imwe nyaya isingazivikanwe nezuro patinoongorora vatengi vedu 'organic search engine performance. Ini ndakatumira kunze uye ndikaongorora kufungidzira ndikadzvanya data kubva kuGoogle Tsvaga Console Zvishandiso uye ndikaona kuti pakanga pasina yakaderera kuverenga, zero chete uye makuru kuverenga. Muchokwadi, dai iwe waizotenda dhata reGoogle Webmasters, iwo chete makuru mazwi aive achityaira traffic raive iro zita rezita uye zvine kukwikwidza mazwi akakwikwidzwa nemutengi. Pane dambudziko, zvakadaro.
Tsvaga Injini Kugadziridza kwemawebhusaiti epasi rese kwagara kuri nyaya yakaoma. Iwe unowana akawanda matipi online asi haufanire kushandisa ese matipi iwe aunonzwa. Tora nguva yekuongorora ruzivo rwaunowana online. Kunyange nyanzvi ichinyora kunge yakanyora, hazvireve kuti nguva dzese dzakarurama. Nyaya iripo, Hubspot yakaburitsa ebook nyowani 50 SEO & Webhusaiti Matipi eInternational Marketer. Isu tiri vateveri veHubspot uye neyedu agency